Ikhaya » Ulawulo lwemeko
Isiqinisekiso seNkqubo / isiQinisekiso se-ISO-9001
Inkqubo yethu yoMgangatho iphucula ukusebenza kwayo ngokugubungela iimfuno ze-ISO 9001: imigaqo yemigangatho ka-2015.
I-Jiesheng Hardware (iJeasnn) ineeNjineli zoLawulo loMgangatho ezinezakhono kunye nabaHloli abahlola imveliso nganye ukuya kwelinye ngokweenkcukacha zenkqubo nganye yokuvelisa, bahlala bebonelela ngeemveliso zoMgangatho kubathengi bethu abaxabisekileyo.
ukuhlangabezana nokugqitha kulindelo lwabathengi
Uthintelo kunye nolawulo lwemveliso engaguqukiyo
Ukulungiswa kweenkqubo zokuvelisa
Owona monakalo usezantsi
Xa kuveliswa izinto eziza kusetyenziswa kwinkqubo entsha siza kuqala ukukhupha isampulu. Njengoko iinxalenye zihambela kwinqanaba lemveliso, siya kuqhuba inkqubo yokuhlola.Ukuqhuba uvavanyo phambi kokuthunyelwa.
Uvavanyo lwezinto ezingenayo
Inxalenye yokuqala yesampulu
Inkqubo yegalelo yolawulo lomgangatho
Ulawulo lomgangatho ephumayo
Inkqubo yokuTsala iiTshathi
Ulondolozo lwethu loomatshini kunye nezixhobo, Ukulinganiswa kwezixhobo zokuhlola, ukuhamba kweenkqubo zokuphucula ngokuqhubekayo kuye kwasivumela ukuba sisondele kufutshane nenjongo yethu yomonakalo osezantsi.
I-Jiesheng Hardware isebenzisa esona sixhobo siphambili sokuhlola kunye neendlela zokuqinisekisa ukuba owona monakalo usezantsi kunokwenzeka, kuxhomekeke kwiimfuno zabathengi kunye nokuntsonkotha kwecandelo, iJiesheng Hardware (Jeasnn) iya kusebenzisa izixhobo ezisemgangathweni ezifana ne:
Ukulungelelanisa umatshini wokulinganisa (CMM)
Oomatshini bokutshiza ngetyuwa
Umlinganiso womgangatho weProfilometer
Umtya wokulinganisa iiGage
iringi yeringi yomtya
Iinkqubo zeJiesheng Hardware (Jeasnn) zoLawulo loMgangatho ziqinisekisa ukuba ezona nkcukacha zingqongqo ziyafezekiswa.